“ लुटाहा प्रबृती बन्द गर सरकार “ - Desh Post
५ मंसिर २०७८, आईतवार ०६:५१ मा प्रकाशित (1 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
देश पाेष्ट /काठमाण्डाैं । मुलुकले परिबर्तन चाहेको थियो यो युगको माग थियो । परिबर्तन भयो तर पद्धति शिद्धान्त ब्याबस्था फेरिनु पर्नेमा ब्यक्ती फेरिए नेता फेरिए मन्त्री फेरिए सरकार फेरिए पटक पटक कुर्सी फेरिए तर ब्यबस्थापन फेरिएन । भ्रष्टाचार दलाल नातावाद कृपावादको चाङगोल भित्र झन झन फस्दै गयो ।
४६ साल ५२,देखि ६२,६३ ले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि डेढदसक नजिक पुगिसकेको अबस्थामा पनि उहीँ पुरानो प्रवृत्तिले राज्य संचालित छ। कमाउ धन्दाको ठेकेदार नेता मन्त्रीहरुनै छन । त्यासैले मैले भनेको हो अघोषित लाईसेन प्राप्त डाकाहरु तिनै नेता मन्त्री अनि जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरु हुन । देशमा गरिब जनताको करले आधा अर्थतन्त्र धानी रहेको बेला झन महङ्गी दिनानु दिन आकासिदैछ। आत्मा निरभर मुखी बनाउनु पर्ने मा आम नागरिकलाई अनुदान मुखी बनाउदै रेमिटेन्स भित्र्याउने साधनको रुपमा ७० लाख भन्दा माथी युवा शक्ति बिदेश बेचिएको छ। तर मुलुकमा आमूल परिबर्तनको निहुमा जनताको ढाड सेक्ने काम लगातार भै रहेछ।
राजनीतिक भित्र ब्यापारिकर तथा कमाउ धन्दाको केन्द्र राजनीति भएको छ। आम गरिव जनताको खतिर बोल्ने कोहि छैन । दलिय द्वन्द तथा खिचातानीको कारण छ छ महिनामा सरकार फेरिने प्रवृत्तिले के देखाउछ भने पक्ष र बिपक्षको उद्देश्य एउटै देखिन्छ। सत्तामा रहदा बिपक्षीको बिरोध फेरि पदच्युत भए सि सत्ताको बिरोध ।आलो पालो सत्तामा पुग्ने खेल मात्र भैरहेछ।
जुनै सरकार आए पनि जनता नै मारमा परिरहेको छ। कर, देखि मूल्य बृदी सरकारै पिछे गरिरहने । पछिल्लो समयम पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिएको छ । उसै त बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिँदा आहत हुन गएका जनता त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले झनै मूल्य वृद्धिको पहाडले किचिनपुगेका ।
नेपाल आयल निगमले अघिल्लो हप्ता बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेपछि यसले भयावह अवस्था निम्त्याएको छ । आमजनतामा यसले निकै ठूलो चाप सिर्जना गरेको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढ्न जाँदा अब एक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ हुन गएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटरको मूल्य १ सय ३६ रुपैयाँमा पुग्दा डिजेल मट्टीतेल प्रतिलिटर मूल्य १ सय १९ रुपैयाँको चुचुरोमा पुगेको छ । आन्तरिकतर्फको हवाई उडानमा इन्धन प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर १ सय १ रुपैयाँ पुर्याएको छ । सबैका लागि आपत्तिको कुरा त के भएको छ भने निगमले गत कात्तिक १२ गते मात्र तेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरिसकेको थियो ।
एक महिनामा दुई÷दुईपटक मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले नेपालमा हुँदै नहुने बादरे प्रवृत्तिको शासन नै चलिरहेको अनुभूति आमजनतालाई दिएको छ । यसविरुद्ध सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी संगठन मूल्यवृद्धि फिर्ता अभियानमा जुटेका छन् । सबै संगठनहरूले एकीकृत रूपमा संघर्षको घोषणा पनि गरिरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रमबाट सुरु हुने संघर्षको बिसाउनी सरकारले उनीहरूको आन्दोलन’दयगत बनाउने धारणामा निर्भर हुने देखिन्छ । एकातिर कोभिड महामारीका कारण आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसमाथि उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्यवृद्धि हुन जाँदा देशले अझैं डरलाग्दो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । महामारीले थलिएको देशको आर्थिक अवस्था आफैमा जर्जर हुँदाको अवस्थालाई सरकारी अनुदान तथा राहतका माध्यमबाट जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने समयमा गरिएको मूल्यवृद्धिले सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न असक्षम छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । सरकारले यसको समीक्षा बेलैमा गर्न सकेन र मूल्यवद्धि फिर्ता गर्नतिर ध्यान दिन चाहेन भने आवधिक निर्वाचनमा यसको ठूलो असर देखिनेछ । यो कदम सरकार आफ्नैका लागि पनि घातक छ । जनता सधै सरकारको अत्याचारलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् ।
देशमा आत्मानिर्भर्ता रुपि बनाउने भन्ने केवल नारामा सिमित रहेको छ। आज सम्म पनि आफ्नो देशमा आफ्नो क्षमता र योग्यता हुदा हुँदै पनि रोजगार नपाउदा लाखौं डिग्री होल्डरहरु खाडिमा बेल्चा हान्न बिबस छन । सरकार वैदेशिक रोजगारमा गएका७० लाख भन्दा माथि नेपाली युवाहरु केवल रेमिटेन्स भित्र्याउने साधन मात्र हो ? नेपाली जनतालाई हरेक क्षेत्रमा करको नाममा पैसामात्र अलुलिरहने । ६,६ महिनामा फेरिने सरकारले एक पछि अर्को गर्दै उहीँ जनतालाई महङ्गिको खाडलमा कहिले सम्म धकेली रहने ?
जनकेन्द्रित सरकार बन्न नसके जनताले विद्रोहमार्फत विकल्प खोज्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायले ठन्डा दिमागले सोच्नैपर्छ । एकै महिनामा दुईपटक मूल्यवृद्धि गरिनुको कारण पनि सरकारले खुलाएको छैन । देश आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिएको घोषणा पनि गरिएको छैन । देशमा ठूल्ठूला दुर्घटना हुन पुगेको पनि छैन । प्राकृतिक प्रकोपका घटना पनि घटेका छैनन् । देशमा युद्ध र आन्दोलन पनि भएका छैनन् । देशमा आर्थिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै संकटकाल घोषणा गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन । बाह्य रूपमा देशमा नाकाबन्दी घोषणा पनि गरिएको छैन ।
छिमेकी देश भारतसँग सम्बन्ध यो हदसम्म बिग्रिएको अवस्था पनि छैन । अरबका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको वा अन्तर्राष्ट्रमै तेलको मूल्य यसरी अकासिएको पनि छैन । तर, तेल र ग्यासको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । यसले देशभित्रको अवस्था विस्फोटक बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । विस्फोटक बन्दै जान थालेको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तत्काल मूल्यवृद्धि रोक्नुको कुनै पनि विकल्प छैन । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर ।